သားသားမီးမီးတို့အတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ အိုင်ဒီယာ (၅)ခု - Lifestyle Myanmar
Home Family သားသားမီးမီးတို့အတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ အိုင်ဒီယာ (၅)ခု
သားသားမီးမီးတို့အတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ အိုင်ဒီယာ (၅)ခု
မိဘတွေအနေနဲ့ သားသားမီးမီးတွေကို အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ ပညာရေးနဲ့ organization skills ကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အချို့သော အလေ့အကျင့်များကို အားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သားသားမီးမီးတွေအတွက် စာကြည့်ခန်းလေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပေးတာက သူတို့ရဲ့ ကျောင်းစာလုပ်မယ့် အချိန်ကို အာရုံနှစ်မြုပ်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ သူတို့မှာ ကျောင်းစတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီး တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ပိုပိုပြီးရှိလာပါပြီ။ စာမေးပွဲ၊ ပရောဂျက်တွေကဲ့သို့ နေ့စဉ်အိမ်စာတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာတွေအားလုံး ပြုလုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေအတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်းက အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပစ္စည်းတွေကို စုစည်းထားလို့ရမယ့် စားပွဲတစ်လုံးလိုပါတယ်
စားပွဲက ကလေးရဲ့ကျောင်းသင်ထောက်ကူတွေအားလုံး သိမ်းထားလို့ရမယ့် အံဆွဲတွေပါတဲ့ စားပွဲကြီးကြီးတစ်လုံး ဖြစ်ရပါမယ်။ စာရွက်တွေ၊ အဘိဓါန်စာအုပ်တွေနဲ့ ကျောင်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ အစီအရီထားဖို့ မေမေတို့က ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှသာ သားသားမီးမီးတွေအတွက် စာကြည့်တဲ့အချိန်ရောက်လာရင် အာရုံပျံ့လွှင့်မှုမဖြစ်တော့ပဲ လက်လှမ်းမီတဲ့နေရာမှာ အကုန်လုံးရှိနေစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
စားပွဲက ကလေး စာကြည့်ဖို့ ထိုင်တဲ့အခါ အစီအစဉ်တကျ ရှိနေရပါမယ်။ ဥပမာ- ခဲတံနဲ့ စာအုပ်တွေ ထားဖို့ တိကျတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ အစီအစဉ်တကျဖြစ်ဖို့အတွက် တာဝန်ပေးထားခြင်းကလည်း သင့်ကလေးအတွက် အပြုအမှုကောင်းဖန်တီးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အခန်းလေးကို သူ့ဘာသာ နေ့စဉ် သန့်ရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ စားပွဲထားမယ့် နေရာကို ရွေးချယ်ခြင်း
အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ စားပွဲကိုထားဖို့ ရွေးချယ်ပါ။ သဘာဝအလင်းရောင်ရတဲ့နေရာမှာ စာဖက်ရင် သင့်ကလေး မျက်လုံးစွေတာတွေ မဖြစ်စေပါဘူး။ သဘာဝအလင်းရောင် အလုံအလောက်မရှိတဲ့အခါ စာလေ့လာဖို့အတွက် စားပွဲတင်မီးအိမ်တစ်ခု ထားပေးတာက စိတကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကုလားထိုင်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့ကျောရိုးကို မတ်မတ်ဖြစ်နေစေမယ့် ထိုင်ခုံဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကုလားထိုင်ဟာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သင့်ပြီး ကလေးရဲ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုလည်း ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားက သင့်ကလေးရဲ့ အရိုးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ကြွက်သားတင်းမာမှုတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုလားထိုင်ကောင်းတစ်လုံးက ကျောင်းစာလုပ်မယ့် သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပိုကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။
၄။ သီးခြားနေရာတစ်ခု ဖန်တီးပါ
တတ်နိုင်သမျှ စာလေ့လာမယ့်နေရာနဲ့ ကစားမယ့်နေရာကို ပိုင်းခြားထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့စည်းကမ်းနဲ့ သိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးကို စတင်တည်ထောင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တဖက်ကကြည့်ရင် စာကြည့်ခန်းက သားသားမီးမီးတွေကို စနစ်တကျနေထိုင်တတ်တဲ့ အပြုအမှုနှင့် တာဝန်ယူတတ်တဲ့အပြုအမှုကောင်းတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါက ကလေးကို သူတို့ရဲ့အလုပ်မှာ အောင်မြင်စွာပြီးစီးနိုင်စေဖို့ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို ကောင်းမွန်စွာ တိုးတတ်စေဖို့ ကူညီပေးတယ်။
ကစားဖို့ နေရာသတ်မှတ်ပေးတာကလည်း သင့်ကလေးကို လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွင်ခွင့်ရစေပြီး သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်ခန်းလိုပဲ ကစားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိခြင်းက ကလေးကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
၅။ စာကြည့်ခန်း သို့မဟုတ် ကစားခန်းမှာ ကွန်ပျူတာ ထားသင့်သလား?
သင့်ကလေးက ကွန်ပျူတာသုံးချင်၊ လေ့လာချင်တဲ့အခါ ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ပေးသုံးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ချို့ကို လေ့ကျင့်တာ၊ သုတေသနလုပ်တာ စတဲ့နေရာတွေမှာ ပေးသုံးပါ။
အပျော်အတွက် ကွန်ပျူတာသုံးတာဆိုရင်တော့ လူကြီးတွေက စောင့်ကြည့်ပေးနေတာ ကောင်းပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ကွန်ပျူတာအချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အချိန်များစွာဖြုန်းတာဟာ ကလေးတွေအတွက် မကောင်းပါဘူး။
ဒုတိယအနေတဲ့ သင့်ကလေး ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဒါက သူတို့လုံခြုံမှုအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအတွက် စာကြည့်ခန်းတစ်ခု ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ကျောင်းစာလုပ်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ထောက်ပံ့ပေးခြင်းက သူတို့ကို တန်ဖိုးတွေ သင်ပေးတဲ့နေရာမှာအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက သူတို့ကို တစ်သက်တာလုံး ကြာရှည်ခံမယ့် တာဝန်ယူတတ်တဲ့ အလေ့အထကို သင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သားသားမီးမီးတို့အတှကျ စာကွညျ့ခနျးတဈခု ဖနျတီးဖို့ အိုငျဒီယာ (၅)ခု
မိဘတှအေနနေဲ့ သားသားမီးမီးတှကေို အစောပိုငျးအသကျအရှယျမှာ ပညာရေးနဲ့ organization skills ကို ထောကျပံ့ပေးမယျ့ အခြို့သော အလအေ့ကငျြ့မြားကို အားပေးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သားသားမီးမီးတှအေတှကျ စာကွညျ့ခနျးလေးတဈခု ပွုလုပျပေးတာက သူတို့ရဲ့ ကြောငျးစာလုပျမယျ့ အခြိနျကို အာရုံနှဈမွုပျစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
ကလေးတှဟော ကွီးပွငျးလာတာနဲ့အမြှ သူတို့မှာ ကြောငျးစတတျတဲ့အခြိနျကစပွီး တာဝနျဝတ်တရားတှေ ပိုပိုပွီးရှိလာပါပွီ။ စာမေးပှဲ၊ ပရောဂကျြတှကေဲ့သို့ နစေ့ဉျအိမျစာတှေ ရှိလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီအရာတှအေားလုံး ပွုလုပျဖို့ သူတို့ရဲ့အလုပျကို အာရုံစူးစိုကျနိုငျမယျ့ နရောလေးတဈခုရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သငျ့ကလေးတှအေတှကျ စာကွညျ့ခနျးတဈခုဖနျတီးပေးခွငျးကလ အကောငျးဆုံး ရှေးခယျြမှု တဈခုဖွဈပါတယျ။
၁။ ပစ်စညျးတှကေို စုစညျးထားလို့ရမယျ့ စားပှဲတဈလုံးလိုပါတယျ
စားပှဲက ကလေးရဲ့ကြောငျးသငျထောကျကူတှအေားလုံး သိမျးထားလို့ရမယျ့ အံဆှဲတှပေါတဲ့ စားပှဲကွီးကွီးတဈလုံး ဖွဈရပါမယျ။ စာရှကျတှေ၊ အဘိဓါနျစာအုပျတှနေဲ့ ကြောငျးသငျထောကျကူပစ်စညျးတှကေို သူ့နရောနဲ့သူ အစီအရီထားဖို့ မမေတေို့က ပွုလုပျပေးရပါမယျ။ ဒါမှသာ သားသားမီးမီးတှအေတှကျ စာကွညျ့တဲ့အခြိနျရောကျလာရငျ အာရုံပြံ့လှငျ့မှုမဖွဈတော့ပဲ လကျလှမျးမီတဲ့နရောမှာ အကုနျလုံးရှိနစေဖေို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။
စားပှဲက ကလေး စာကွညျ့ဖို့ ထိုငျတဲ့အခါ အစီအစဉျတကြ ရှိနရေပါမယျ။ ဥပမာ- ခဲတံနဲ့ စာအုပျတှေ ထားဖို့ တိကတြဲ့နရောတဈခုရှိတာဖွဈပါတယျ။ အခနျးထဲမှာ အစီအစဉျတကဖြွဈဖို့အတှကျ တာဝနျပေးထားခွငျးကလညျး သငျ့ကလေးအတှကျ အပွုအမှုကောငျးဖနျတီးဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ သူ့အခနျးလေးကို သူ့ဘာသာ နစေ့ဉျ သနျ့ရှငျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၂။ စားပှဲထားမယျ့ နရောကို ရှေးခယျြခွငျး
အလငျးရောငျကောငျးကောငျးရတဲ့နရောမှာ စားပှဲကိုထားဖို့ ရှေးခယျြပါ။ သဘာဝအလငျးရောငျရတဲ့နရောမှာ စာဖကျရငျ သငျ့ကလေး မကျြလုံးစှတောတှေ မဖွဈစပေါဘူး။ သဘာဝအလငျးရောငျ အလုံအလောကျမရှိတဲ့အခါ စာလလေ့ာဖို့အတှကျ စားပှဲတငျမီးအိမျတဈခု ထားပေးတာက စိတကူးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
ကုလားထိုငျကို ရှေးခယျြတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ကြောရိုးကို မတျမတျဖွဈနစေမေယျ့ ထိုငျခုံဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ ကုလားထိုငျဟာ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈသငျ့ပွီး ကလေးရဲ့ကိုယျဟနျအနအေထားကိုလညျး ကောငျးကောငျးထောကျပံ့ပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ကောငျးမှနျတဲ့ကိုယျနဟေနျထားက သငျ့ကလေးရဲ့ အရိုးတှကေို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ ကွှကျသားတငျးမာမှုတှေ မဖွဈစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကုလားထိုငျကောငျးတဈလုံးက ကြောငျးစာလုပျမယျ့ သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုကျမှုကို ပိုကောငျးစပေါလိမျ့မယျ။
၄။ သီးခွားနရောတဈခု ဖနျတီးပါ
တတျနိုငျသမြှ စာလလေ့ာမယျ့နရောနဲ့ ကစားမယျ့နရောကို ပိုငျးခွားထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သငျ့ကလေးရဲ့စညျးကမျးနဲ့ သိမွငျမှုဖှံ့ဖွိုးရေးကို စတငျတညျထောငျဖို့ အရေးပါတဲ့ နညျးလမျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
တဖကျကကွညျ့ရငျ စာကွညျ့ခနျးက သားသားမီးမီးတှကေို စနဈတကနြထေိုငျတတျတဲ့ အပွုအမှုနှငျ့ တာဝနျယူတတျတဲ့အပွုအမှုကောငျးတှကေို ရရှိစပေါတယျ။ ဒါက ကလေးကို သူတို့ရဲ့အလုပျမှာ အောငျမွငျစှာပွီးစီးနိုငျစဖေို့ အာရုံစူးစိုကျမှုနှငျ့ သူတို့ရဲ့စှမျးရညျကို ကောငျးမှနျစှာ တိုးတတျစဖေို့ ကူညီပေးတယျ။
ကစားဖို့ နရောသတျမှတျပေးတာကလညျး သငျ့ကလေးကို လှတျလပျစှာ ပြျောရှငျခှငျ့ရစပွေီး သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျလှုပျဆောငျမှုလေးတှကေို ဖနျတီးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ စာကွညျ့ခနျးလိုပဲ ကစားတဲ့နရောတဈခုရှိခွငျးက ကလေးကို စိတျကူးစိတျသနျးနှငျ့ တီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျးတှေ ဖှံ့ဖွိုးဖို့ ထောကျပံ့ပေးပါတယျ။
၅။ စာကွညျ့ခနျး သို့မဟုတျ ကစားခနျးမှာ ကှနျပြူတာ ထားသငျ့သလား?
သငျ့ကလေးက ကှနျပြူတာသုံးခငျြ၊ လလေ့ာခငျြတဲ့အခါ ပညာရေးဆိုငျရာ ရညျရှယျခကျြအတှကျသာ ပေးသုံးသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ- နိုငျငံခွားဘာသာစကားကဲ့သို့ ကြှမျးကငျြမှုတဈခြို့ကို လကေ့ငျြ့တာ၊ သုတသေနလုပျတာ စတဲ့နရောတှမှော ပေးသုံးပါ။
အပြျောအတှကျ ကှနျပြူတာသုံးတာဆိုရငျတော့ လူကွီးတှကေ စောငျ့ကွညျ့ပေးနတော ကောငျးပါတယျ။
ပထမဦးဆုံး ကှနျပြူတာအခြိနျကိုသတျမှတျပါ။ ကှနျပြူတာရှမှေ့ာ အခြိနျမြားစှာဖွုနျးတာဟာ ကလေးတှအေတှကျ မကောငျးပါဘူး။
ဒုတိယအနတေဲ့ သငျ့ကလေး ဝငျရောကျခှငျ့ရှိတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို စောငျ့ကွညျ့ပါ။ ဒါက သူတို့လုံခွုံမှုအတှကျ ဖွဈပါတယျ။
ကလေးအတှကျ စာကွညျ့ခနျးတဈခု ဖနျတီးခွငျး သို့မဟုတျ ကြောငျးစာလုပျဖို့ ပတျဝနျးကငျြကောငျးတဈျခု ထောကျပံ့ပေးခွငျးက သူတို့ကို တနျဖိုးတှေ သငျပေးတဲ့နရောမှာအခွခေံအကဆြုံးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒါက သူတို့ကို တဈသကျတာလုံး ကွာရှညျခံမယျ့ တာဝနျယူတတျတဲ့ အလအေ့ထကို သငျပေးပါလိမျ့မယျ။
Previous articleအမြင်မလှတဲ့ ငါးမျက်စိတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်း (၈)ခု
Next articleအမွှေးစုတ်ဖွားနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ရေချိုးလိုက်တဲ့အခါ
Nandar Lwin - July 15, 2019